Madasha Xisbiyada Qaran Oo ka Hor-timid Qodobo ku Jira Sharciga Doorashooyinka.(Sawiro) AwdalMedia Awdal Media Madasha Xisbiyada Qaran Oo ka Hor-timid Qodobo ku Jira Sharciga Doorashooyinka.(Sawiro)
Madasha Xisbiyada Qaran Oo ka Hor-timid Qodobo ku Jira Sharciga Doorashooyinka.(Sawiro)
Qaar ka mid ah xildhibaannada Madasha Xisbiyada Qaran ayaa shir xasaasi ah oo looga arrinsanaayo sharciga doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka ah ee dalka maanta ku yeeshay xaruntooda KMG ah ee Muqdisho.
Qodobkaas, ayaa waxaa ku qoran in haddii ay keenaan duruufo, sida amni darro baahsan oo dalka ka dhacda, uu baarlamanka waqtiga kororsano karo muddo lix bilood ah.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa dooneysa in qodobkaas laga saaro sharciga doorashooyinka, waxaana ay qorsheynayaan inay mooshin ka keenaan, sida xubno ka mid ah ay u sheegeen Caasimada Online.
addaba maxaa ku qoran qodobka 53-aad ee sharciga doorahsooyinka:-
Muddada xilhaynta Goleyaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo madaxda la doortay wuxuu shacabku u idmaday muddo cayiman oo ku xadiddan Qodobbada 60aad iyo 91aad ee Dastuurka;
Muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib ugu dhici kartaa oo keliya haddii ay jiraan daruufo adag oo saameeya dalka oo dhan ama kala bar oo aan suurtagal ka dhigayn in doorasho la qabto;
Boorama:- Sheekh Saaweer Oo ka Hadley Arrimaha Masaalixda Bulshada.
Arday Iyo Turki ku Dhimatay Qarax ka Dhacay Muqdisho.